‘पोई पर्यो काले’को छायांकन पोखरामा,कसको छ मुख्य भुमिका ? | NepalDut
‘पोई पर्यो काले’को छायांकन पोखरामा,कसको छ मुख्य भुमिका ?
चलचित्र ‘पोइ पर्यो काले’को छायांकन पोखराबाट सुरु गरिएको छ । पोखराको विन्दवासिनी मन्दिरमा पूजा गर्दै चलचित्रको छायांकन प्रारम्भ गरिएको हो ।
कमेडी कथामा बन्न लागेको यो चलचित्रमा सौगात मल्ल, पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, राजाराम पौडेल, श्रृष्टी श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
शिव ढकालको छायांकन रहने चलचित्रको शिर्ष भूमिकामा सौगात मल्ल छन् । चलचित्रले कालो पोई पर्दै पर्दैन भनेर घमण्ड गर्ने यूवतीको जीवनमा नै कालो पोई परेपछि हुने घटनाक्रमलाई उठान गर्ने निर्देशक राणाले बताए । चलचित्रलाई दिपक मनाङ्गे र देवी राइले निर्माण गर्दैछन् ।